‘सहरवासीलाई फोहोरले होइन, सरकारले सताएको हो’
राजधानीका सहरमा फोहोरका थुप्रा चुलिँदै गर्दा समाधानकारी निकायबीचको विवाद पनि बढ्दै गएको । स्थानीय तह र मन्त्रालयलका पदाधिकारीबीच फोहोर उठाउने विषय दोषारोपण गर्ने माध्यम बनेको छ । उनीहरु एक आपसलाई दोष लगाउँदै पन्छिने काम गरेका छन् ।
जिम्मेबार निकायमा बस्नेको जुहारीले दैनिकी गुजार्न सहरमा पैदल डिह्नेलाई थप सास्ती पुगेको छ । ‘सरकारले चाहने हो भने तुरुन्तै समाधान गर्न सक्छ छर फोहोर देखाएर सरकारले सहरवासीलाई सताएको छ,’ बुधबार ललितपुरको पुल्चोकमा भेटिएका नारायण महर्जनले भने, ‘यतिधेरै निकाय हुँदाहुँदै पनि फोहोर उठाउन नसक्नु लज्जाको विषय हो ।’
यसबारे सामान्य प्रशासन तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तह गम्भीर नबन्दा फोहोरले राजधानीलाई सताएको बताए । उनले भने, ‘सबै काम गर्ने निकाय स्थानीय तह नै हुन्, तर जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि आएर पनि यसको कुनै समाधान खोजेको देखिन्न । उल्दै मन्त्रालयको काम देखाउँदै पन्छिएका छन् ।’
कहाँकहाँ छ फोहोर
जोरपाटी, चावहिल, बागबजार, प्रदशनीमार्ग, नयाँ वानेश्वर, मंगलबजार, लगनखेल, इमाडोल, पुल्चोक, कुपण्डोल, ग्वार्को लगायतका मुल सडकमा फोहोर थुपारिएर राखिएको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका सहित उपत्यकाका स्थानीय तह प्रभावकारी रुपमा फोहोर उठाउन सकेका छैनन् । नुवाकोटको सिसडोलमा रहेको ल्याण्डफिल्ड साइट जाने सडक विग्रिएको भन्दै यी निकाय पन्छिरहेका छन् । सहरका मुख्य ठाउँमा असार १८ देखि २३ गतेसम्म ६ दिन पहिरोका कारण फोहोर उठेको थिएन् । त्यसपछि स्थानीयबीच विवाद भएर फोहोर रोकियो ।
अहिले उक्त विवाद समाधान भइसकेको छैन । ‘समस्या हाम्रो मात्रै होइन, माथिल्लो तहको नै हो,’ ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले भने, ‘मन्त्रालयले नै यो विषयलाई जोडतोडले उठाएर काम थालेको भए हाम्रो ठाउको दुखाई हुने थिएन ।’ उनका अनुसार ललितपुर महानगरले फोहोर व्यवस्थापनको लागि छुट्टै ठाउँ खोजेको थियो । तर, जिल्लामा ल्याण्डफिल्ड साइट बनाउने ठाउँ कहि नभेटिएपछि काठमाडौं महानगरसँग मिल्नुको विकल्प रहेन ।
कस्ले बनायो गन्ह्याउने सहर ?
काठमाडौं महानगर तथा ललितपुर महानगरले सबस्टेसनमा लगेर फोहोर स्टोर गरेको छ । तर, निजी क्षेत्रका केही कम्पनीले उठाउने फोहोर भने सिसडोल रोकिँदा उठाउँदैनन् । जसले गर्दा सडकमा फोहोर हुने गरेको छ । नीजि क्षेत्रले उठाउने ठाउँको फोहोर स्टोर गर्ने ठाउँ नहुँदा भने सहरका टोलटोलमा फोहोर नउठिरुहेको छ । जसले गर्दा यतीबेला राजधानी गन्ह्याउने सहर बनेको छ ।
उपत्यकाको फोहोर विर्सजन गर्ने ठाउँ सिसडोलको व्यवस्थापन जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकाले लिएको छ । सबैभन्दा बढी फोहार समेत काठमाडौं महानगरपालिकाबाट उत्पादन हुन्छ । दैनिक पाँच सय मेट्रिक टन फोहोर महानगर र अन्य नगरबाट उपत्यकाबाट दैनिक एक हजार मेट्रिक टन फोहोर सिसडोलमा जान्छ ।
महानगरले व्यवस्थापन गरिरहेको सिसडोलमा अन्य नगर तथा संस्थाले शुल्क तिरेर फोहोर विर्सजन गर्दै आएका छन् । महानगरले न्युनतम ८ टनसम्म रु १ सय ५० र ८ टन माथिको फोहोरको शुल्क २ सय ५० रुपैँया लिएर फोहोर विर्सजन गर्न दिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले सडकको समस्या देखाएर पन्छिए । उनले यसको समाधान खोजिरहेको बताए । उनले भने, ‘सडक विग्रिएपनि दैनिक रुपमा सिसडोलमा फोहोर गइरहेको छ, मूल समस्या सडक नै हो ।’ १२ वर्षअघि दुई वर्षका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्न भन्दै सिसडोल सरकारले लिएर महानगरलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो । सम्झौताभन्दा नाघेको लामो समय भएकाले बेलाबेलामा स्थानीयले समेत सिसडोलमा फोहोर फ्याँक्ने नदिने भन्दै विरोध गर्छन् । तैपनि विकल्प खोज्न भने सकेको छैन् ।
ठाउँ छैन सिसडोलमा
नुवाकोट विगत १२ वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर ‘डम्प’ गरिँदै आएको नुवाकोटको सिसडोल÷ओखरपौवामा अब २ महिना मात्र फोहर अट्ने आकलन छ । योसँगै अब कहाँ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । सरकारले २०५८ सालमै नुवाकोटकै बञ्चरेडाँडालाई ल्याण्ड फिल्ड साइड बनाउन स्थानीयलाई मुआब्जा बुझाइसकेको छ । तर, हालसम्म खोला डाइभर्सन र हिमपाइन राख्ने काम मात्र भएको छ ।
उक्त क्षेत्रलाई डम्पिङ साइट बनाउन अझै तीन वर्ष लाग्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । महानगरका सहप्रवक्ता नमराज ढकालले दुई महिनापछि झन् सकस हुँदै जाने बताए । उनले भने, ‘सिसडोल भरिसकेको छ । अबको एकदुई महिनाभित्र भने फोहोर फ्ँयाक्ने ठाउँ नै हुँदैन् । त्यसपछि के गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना छैन ।’
सरकारले सिसडोलको विकल्पमा नुवाकोट र धादिङमा पर्ने बन्चरेडाँडामा विकल्पमा लिएको छ । तर, बन्चरेडाँडामा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रमा विकास गर्ने काम भने भएको छैन् । उपत्यकाबाट दैनिक १० हजार टन फोहोर सिसडोलमा डम्प गर्ने गरिएको छ । २०५८ सालमै सरकारले बञ्चरेडाँडाका स्थानीयलाई मुआब्जा दिएको थियो । हालको ककनी गाउँपालिका वडा २ मा पर्ने यस क्षेत्रमा ल्याण्ड फिल्ड साइट बनाउनको निम्ति २०६१/६२ देखि वार्षिक ढेड करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्दै आएको छ ।
फोहर फाल्ने ठाउँ तयार पार्ने मुख्य जिम्मा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रको हो । तर, केन्द्रले खासै काम गरेको देखिन्न । अहिले उपत्यकाका १८ मध्ये १२ नगरपालिकाको फोहोर ओखरपौवामा फाल्ने गरिएको छ ।
तयार छैन बञ्चरेडाँडा
१ सय २५ ट्रकले दैनिक उपत्यकाको फोहर नुवाकोट पु¥याउने गरेका छन् । ओखरपौवा काठमाडौं टेकुदेखि २८ किमीको दूरीमा पर्छ । फोहर व्यवस्थानबारे २०६७ सालमा ग्लोबल टेण्डर गरे पनि नगरपालिकाले खास विषयमा चासो नदिएका कारण ल्याण्ड फिल्ड साइट निर्माणको काम ढिलो हुँदै गएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर अन्तिम व्यवस्थापन गर्ने भनिएको धादिङ् र नुवाकोट जिल्लाको सिमानामा अवस्थित बञ्चरे डाँडाको पूर्वाधारमा ढिलाइ हुँदाको असर ओखरपौवा ल्याण्डफिल साइटमा परेको छ । कारण यही हो, अहिले समयमा फोहोर संकलन, ढुवानी र अन्तिम व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसको असर ल्याण्डफिल साइट, ट्रान्सफर स्टेशन, सडक हुँदै नागरिकको घर घरमा पुग्ने क्रममा छ ।
ट्राफिक प्रहरीद्वारा अार्थिक वर्षकाे अन्तिम तिन महिनामा ९५ लाख बढि राजस्व संकलन
डा. केसीलाई लिन हेलिकप्टर जुम्ला पुग्यो, विद्यार्थीकाे अवरोध
कांग्रेसको आन्तरिक विवाद मिल्यो
सरकारलाई घुँडा टेकाउन चिकित्सकहरु हडतालमा
बिहिबार भारी बर्षा हुने सम्भावना, सजग रहन आग्रह